कसरी आयो लोकमान माथि महाअभियोगका प्रस्ताव ? प्रस्तावक शाहीका यूद्ध अनुभव देखी महाअभियोग सम्मका सनसनिपूर्ण रोचक खुलासा – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७३ मंसिर ३ गते १६:१२
काठमाडौं – कार्तिक ३ गते नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा एउटा अप्रत्यासित घटना घट्यो, त्यो पनि यूद्ध स्तरमा । वि.सं २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेपाली जनताले नजिकबाट हतियार सहितका युद्धका खबरहरु सुनिरहन्थे । कहिले जिल्ला सदरमुकाम कब्जा त, कहिले आर्मी व्यारेकमाथि हमला । सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादी छापामारहरुले रातारात जिल्ला सदरमुकाममा हमला गर्थे र उज्यालो नहुँदै आफ्नो इलाकातिर फर्किहाल्थे । भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रभावले सिंहदरवार देखी देशैभरि तरंग ल्याउँथ्यो ।
सेनाको ब्यारेकमा रहँदा धेरैजना डिभिजन कमाण्डरहरुले भ्रष्टचार गरेका आरोपहरु लागे तर उनले नेतृत्व गरेको डिभिजनमा कुनै पनि विवाद आएन । सेनालाई खुशी पार्दै उनी आफ्नो पार्टीमा सहज रुपमा अवतरण भएका थिए । सेना समायोजन पछि मूलधारको राजनीतिमा आएका शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको कालिकोट जिल्लाको संगठनलाई मजबुत बनाउनतिर ध्यान दिए । जिल्लामा संगठन मजबुत बनाएकै कारण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनी विजयी हुन सफल भए । खुशीको अबीर लगाए । उनको विजय पश्चात कालिकोटक्षेत्र नं. १ मा विजयी जुलुल निक्लियो । यो उनको मिहिनेतले पाएको सफलता हो । माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका शाही माओवादी र कांंग्रेसको समीकरणमा बनेको यो सरकारमा मन्त्री बन्ने धेरै हल्ला थियो तर पछि त्यो हल्लाले सार्थकता पाउन सकेन । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस गरेपछि भने उनको चर्चा एकाएक सतहमा आयो र अबचाहि उनी पक्कै मन्त्री बन्नेबाटो खोले भन्नेहरुको जमात पनि कमी छैन यो सहरमा ।
उनले लडेको पहिलो युद्ध थियो, कालीकोट शान्तिघाटको पोदमारा आक्रमण । त्यहाँ लड्न जाँदा उनको तर्फबाट एउटा कमाण्ड र अर्को एउटा कमाण्ड गरी दुई टिम युद्धमा सहभागी भएको थियो । कर्णाली अञ्चलकै पहिलो फौजी आक्रमणले कर्णालीमा मात्र हैन, भेरी र सेती अञ्चलमा पनि त्यसले ठुलै तहल्का मच्चायो । माओबादी सेनाको तर्फबाट केही कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएपनि सरकार तर्फबाट तीन जनाको ज्यान गयो र दर्जनांै घाइते भए । पहिलो पटककै युद्धमा सोचेभन्दा राम्रो सफलता पाएपछि उनलाई झन् प्रेरणा मिल्यो । अझ लड्ने साहस बढेर आयो । पोदमाराको युद्धले सबैलाई साहस दिलायो । उनीहरु लड्न झन् प्रेरित भए । पोदमारामा लड्न जाँदा उनीहरुसंग हतियार थिएन, भँगारुको लठ्ठी लिएर पूर्ण आत्मबल सहित युद्धमा होमिएका छापामारहरुले फर्किँदा एउटा राइफल, एउटा पेस्तोल सहित धेरै जिलेटिनहरु बरामद गरेर फर्किए ।
जनयुद्धको समयमा सर्वाेच्च कमाण्डर थिए अध्यक्ष प्रचण्ड । उनलाई एम्बुुस थापेको देखि जिल्ला सदरमुकाम कब्जाबारेका सम्पूर्ण जानकारी दिइन्थ्यो । आर्मी वा प्रहरीसँग जम्काभेट भएकोमा बाहेक सबै कुराको जानकारी सुप्रिमोलाई हुन्थ्यो तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा सुप्रिमोलाई विना जानकारी दिई दर्ता भयो । यसमा धेरै कारणहरु थिए । साँसद शाही भन्छन्, ‘कतै सुप्रिमोले बिचमा रोक्ने त हौइनन् भन्ने डर थियो हामीलाई । कसैले जानकारी पाइहाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुने खतरा थियो, त्यही भएर प्रचण्डलाई समेत जानकारी नदिई संंसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो ।’ यस्तै धेरै जना हस्ताक्षरकर्ता साँसदहरुलाई पनि आफ्नो हस्ताक्षर कुन प्रयोजनको लागि लिइदैछ भन्ने जानकारी थिएन । यूद्ध स्थरमा सुप्रिमोलाई जानकारी नदिई घटेको यो पहिलो घटना हो माओबादी कमाण्डरहरुकोे लागि ।